जूम कलबाट थकित हुनुहुन्छ? कम्पनीले एट-होम होलोग्राम मेशिन प्रस्ताव – Khabarbot
महामारीको समयमा संचार गर्नको लागि नयाँ तरीका खोज्दै हुनुहुन्छ? लस एन्जलस कम्पनीले तपाईको बस्ने कोठामा लाइभ होलोग्राम बिम गर्न फोन बुथ साइज मेशिनहरू सिर्जना गरेको छ।
PORTL द्वारा बनाएको उपकरणले प्रयोगकर्तालाई अर्को व्यक्तिको जीवन आकारको होलोग्रामको साथ वास्तविक समयमा कुरा गर्न दिन्छ। मेशिनहरु पनि टेक्नोलोजी संग सुसज्जित गर्न को लागी ऐतिहासिक व्यक्तित्व वा निधन भएका नातेदारहरु को रेकर्ड होलोग्राम संग कुराकानी सक्षम गर्न सकिन्छ।
प्रत्येक PORTL उपकरण सात फिट (२.१ मीटर) अग्लो, पाँच फिट (१.m मीटर) चौंडा र दुई फिट (०..6 मीटर) गहिराइ हो, र यसलाई मानक पर्खाल आउटलेटमा प्लग गर्न सकिन्छ। क्यामेरा र सेतो पृष्ठभूमि भएको जो कोहीले मेशिनमा होलोग्राम पठाउन सक्दछ मुख्य कार्यकारी डेभिड नुस्बामले “होलोपोर्टेशन” भनेको छ।
“हामी भन्छौं यदि तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्न भने, तपाईं त्यहाँ बीम राख्न सक्नुहुन्छ, ‘नुस्बाउमले भने जसले पहिले रोनाल्ड रेगनको पूर्व कम्पनीको पुस्तकालयको लागि होलोग्राम विकास गर्ने कम्पनीमा काम गरेका थिए र डिजिटल पुनर्जीवित रैपर टुपाक शकुरले भने। “हामी सैन्य परिवार जडान गर्न सक्षम छौं जुन एक अर्को महिनामा देखेको छैन, विपरीत तटका मानिसहरु,” वा कोही पनि जो कोरोनाभाइरस संग लड्न सामाजिक दूरी छ, नुस्बाउमले भने।
मेसिनको लागि मूल्यहरू $ ,000०,००० (लगभग lakhs 45 लाख रूपैयाँ) बाट शुरू हुन्छन्, जसको लागत नुस्बाउम आगामी years देखि drop वर्षमा झर्नेछ। कम्पनीले अर्को वर्षको सुरूमा कम मूल्य ट्यागको साथ सानो ट्याबलेटटप उपकरणको पनि योजना बनाएको छ। उपकरणहरू संग्रह गर्न सकिन्छ कि होलोग्राम रेकर्डि। उत्पादन गर्न लस एन्जलस-आधारित कम्पनी स्टोरी फाईलबाट कृत्रिम खुफिया प्रविधि संग सुसज्जित छ। हालको उपकरणमा त्यो थप्नाले लागत कम्तिमा $ 85,000 मा ल्याउँछ।
कम्पनीहरूले संग्रहालयहरूमा प्रचार गरिरहेका छन्, जसले आगन्तुकहरूलाई ऐतिहासिक व्यक्तित्वको होलोग्राम प्रश्न गर्न सक्दछन्, र परिवारहरूलाई भविष्यमा पुस्ताहरूको लागि सूचना रेकर्ड गर्न। उनीहरूले महसुस गर्न सक्छन् जस्तै उनीहरूले रेकर्ड गरिएको होलोग्रामसँग कुराकानी गरिरहेका छन्, स्टोरीफाइलका मुख्य कार्यकारी हेदर स्मिथले भने
आँफुलाई दाह्रा निस्किएकी नायिका भन्ने पत्रकार सुवेदीविरुद्ध पूजाले दिइन् उजुरी, मागिन् न्याय